Nofaohin’ny taxibe teny amin’ny lalana digue… : vaky ny lohan’ilay lehilahy saika hamono tena | NewsMada
80% des PV traités, à Tana: la victoire de Naina Andriantsitohaina de précise
Torana tsy nahatsiaro tena: nianjera avy eny amin’ny rihana fahatelo ilay mpiasa
Nofaohin’ny taxibe teny amin’ny lalana digue… : vaky ny lohan’ilay lehilahy saika hamono tena
Azo lazaina ho naratra mafy, satria vaky loha mihitsy ity lehilahy iray, voadona sy nofaohan’ny taxibe iray, teny amin’ny lalana digue, Ambodihady, omaly maraina ity. Voalaza fa saika hamono tena izy io, ary nitsoraka tamin’ireo fiara nandalo.
Fiarakodia roa : 4X4 niromorimo mafy sy taxi-be 194, no efa nohitsiany saingy samy nahay niala azy ny mpamily. Niezaka niala azy koa, raha iny izy avy hatrany dia nitsoraka teo amin’ny arabe iny, ny mpamilin’ity taxi-be iray 114, saingy tsy tafajanona ary nifatratra teo am-bodin’ny fefiloha eo amin’ny Digue. Naratra mafy, vaky loha vokatr’izany ity lehilahy iray, voalaza fa saika hamono tena. Nitangorona vetivety ny olona teny an-toerana raha nahita ity fikasan-dratsin’ity lehilahy ity. Voatery nosokirina tao amban’ilay taxi-be mihitsy izy. Tao ny gaga, nisy kosa tezitra tamin’ny fihetsika nataony ka nojeren’ny sasany fotsiny izy. Tao ihany anefa ireo nangoraka sy nitsetra azy ka nitondra ilay niharam-boina nankeny amin’ny hopitaly. Nilaza ho samy tsy nahafantatra azy avokoa ny ankamaroan’ireo olona nahita ilay lehilahy.
Nahitana fahasimbana ihany koa ilay taxi-be 114 nifatratra tamin’ny fefiloha rehefa niala azy tampoka.
Nahazo vahana ny famonoan-tena…
Tsikaritra fa nahazo vahana indray tato ho ato ny famonoan-tena amin’ny alalan’ny fitsorahana any amban’ireny fiara mandeha eny amin’ny arabe ireny. Vao haingana no nisy ilay lehilahy nitsoraka tao ambany lamasinina teny Isotry, saingy avotra soa aman-tsara ihany koa izy tamin’izay rehefa voasaringotry ny kodiarambin’ilay lamasinina. Naratra mafy teo amin’ny lohany koa ilay niharam-boina tamin’izay.
Seces sampana Antananarivo: nanazava ny sain’ny mpinatra ny mpampianatra 05/12/2019
Centre de diagnostic neuropsycho (CDN): ny mararin’ny fanaintainana maharitra no be mitsabo tena 05/12/2019
Toetr’andro: mihaodihaody ireo rivodoza roa 05/12/2019
Niharan’ny herisetra: nizarana kilalao ireo ankizy 22 05/12/2019
Fety asabotsy tolakandro: hamaly ny fangatahan’ny mpankafy ny Iraimbilanja 05/12/2019